ह्युगो चाभेज र बोलिभारियन क्रान्ति
सिमोन बोलिभारको भूमिमा जन्मिएका ह्युगो राफेल चाभेज फ्रियास (ह्युगो चाभेज) समाजवादी, अन्तर्राष्ट्रियवादी, राजनीतिज्ञ र क्रान्तिकारी हुन् । सन् १९९९ देखि २०१३ सम्म भेनेजुएलाका राष्ट्रपति रहेका चाभेज एक्काइसौँ शताब्दीका साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका पर्याय बनेका थिए ।
क. प्रमेश पोखरेल २०७७ साउन १५ गते बिहीवार
दक्षिण अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका नायक सिमोन बोलिभारको जन्मभूमिका रुपमा चिनिने भेनेजुएला क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपालभन्दा धेरै ठूलो रहेता पनि जनसंख्यामा लगभग नेपालकै जति भएको ब्राजिल र कोलम्बियाको छिमेकी देश हो । करिब ३०० वर्ष पश्चिमा उपनिवेश र त्यसपछि सैनिक शासन बेहोर्नु परेकोले भेनेजुएलामा स्पेनिस भाषा बोलिन्छ । यो अत्यन्तै सुन्दर र प्रकृतिको वरदान रहेको विश्वकै ठूलो तेल र ग्याँसका साथै सूनको भण्डार समेत रहेको देश हो ।
सिमोन बोलिभारको भूमिमा जन्मिएका ह्युगो राफेल चाभेज फ्रियास (ह्युगो चाभेज) समाजवादी, अन्तर्राष्ट्रियवादी, राजनीतिज्ञ र क्रान्तिकारी हुन् । सन् १९९९ देखि २०१३ सम्म भेनेजुएलाका राष्ट्रपति रहेका चाभेज एक्काइसौँ शताब्दीका साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका पर्याय बनेका थिए । उनले भेनेजुएलामा एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे भने बृहत सामाजिक परिवर्तनबाट श्रमजीवी जनताको हक, हित र समृद्धिको सुनिश्चित गरे ।
साम्राज्यवादीहरुको व्यापक घेराबन्दी, चरम नाकाबन्दी र लगातार हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्दै उनले व्यापक रुपमा कम्युनहरु स्थापना गर्ने, रोगजारीको सुनिश्चित गर्ने, तेल खानी र कलकारखानाको राष्ट्रियकरण गर्ने तथा सेना लगायत राज्यका संयन्त्रको समेत पुनःसंरचना गर्ने नमूना कार्य गरेका थिए । पाँचौ अन्तर्राष्ट्रियको सोचले उनलाई विवादमा ल्याएपनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए । त्यही बोलिभारियन क्रान्तिकै जगमा हाल भेनेजुएलामा साम्राज्यवाद विरोधी निकोलस मादुरोको समाजवाद उन्मुख सरकार निर्मम हस्तक्षेप र चरम नाकाबन्दीको पनि डटेर सामना गर्दै छ ।
जन्म र बाल्यकालः
२८ जुलाई १९५४ मा भेनेजुएलाको ग्रामीण क्षेत्रको सबनेटा भन्ने सहरमा जन्मिएका चाभेज एक शिक्षित परिवारमा परिवारको जीवित छ दाजुभाइ मध्येका माइलो सन्तानको रुपमा रहेका थिए । बाबुआमा दुवै शिक्षक रहे पनि उनको परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले हजुरआमासँग बसी शिक्षा आर्जन गरे । स्कुले जीवनमै कार्ल मार्क्स र इस्टेवन रुइज गेभाराबाट प्रभावित उनी त्यतिबेला भेनेजुयलामा चलिरहेको क्रान्तिबाट प्रभावित थिए । महान क्युवाली क्रान्ति तथा त्यसको जगमा सञ्चालित भेनेजुयाली गुरिल्ला युद्ध एफएएलएन (FALN) बाट समेत उनी निकै प्रभावित भए । तर पनि उनी पार्टी र क्रान्तिको अभियानमा अलि पछि सामेल भए ।
सैनिक प्रतिष्ठानमा भर्नाः
सन् १९७१ मा चाभेज राष्ट्रिय सैनिक प्रतिष्ठानमा भर्ना भए । उनी त्यहाँ खास सेनामा भर्ती हुनुभन्दा पनि बेसबल खेलाडी बन्ने हेतुले गएका थिए । तर त्यहाँ उनी खेलभन्दा पढाइमा लागे र १९७५ मा स्नातक शिक्षा प्राप्त गरे । त्यसपछि उनी सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट बने । तर उनको पहिलो मिसन नै गुरिल्ला विरोधी मिसन भयो । उनी त्यसमा काम गर्दा मात्र होइन, बाल्यकालदेखि नै क्रान्तिकारीहरुप्रति सहानुभूति राख्दथे । पछि उनको दाजु समेत उक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सरिक भएकोले उनले गुरिल्ला सिध्याउने भन्दा पनि सैनिकको जागिर छाड्ने सोच समेत लिएका थिए । तर यसै बिच सन् १९७७ मा उनले भेनेजुएला क्रान्तिकारी पार्टीका प्रमुख डग्ल्यास ब्राभोसँग भेट गर्न पाएँ । यसबाट चाभेज निकै प्रभावित भए । उनले जागिर छाडेनन् । उनको मनमा क्रान्तिप्रति अझ बढी सकारात्मक भावना जाग्यो ।
क्रान्तिकारी समूहदेखि राष्ट्रपतिसम्म
सन् १९८२ मा चाभेज र केही सैनिक अधिकृतहरुले बोलिभारियन आन्दोलन २०० भन्ने क्रान्तिकारीहरुको एक समूह गठन गरे । उनीहरुको उद्देश्य सत्ता कब्जा गर्नु थियो । सन् १९९२ मा उनीहरुले कार्लोस पेरेस निरंकुश सत्ता विरुद्ध हमला गरी ढाल्ने प्रयास गरे । तर उनीहरु असफल भए । त्यसैबेला उनले २ मिनट पत्रकार र सञ्चार माध्यममा ‘कमरेडहरु अहिलेलाई माफ गर्नुहोला तर हामीले भेनेजुएलामा परिवर्तन ल्याएरै छाड्ने छौँ’ भनेको भनाइ आम जनताको बलियो आशा बन्न पुग्यो । उनी २ वर्ष जेलमा बसे पनि जनतामाझ निकै लोकप्रिय बन्दै गए । उनले पाँचौ गणतन्त्र (फिफ्थ रिपब्लिक) पार्टीको स्थापना गरे । त्यही पार्टीबाट उनी १९९८ को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने र ५६ प्रतिशत मतका साथ निर्वाचित भए ।
बोलिभारियन क्रान्ति र समाजवादी आन्दोलन
विश्वकै उदाहरणीय क्रान्तिको रुपमा बोलिभारियन क्रान्ति रहेको छ । सन् १९९९ देखि नै चाभेजले व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारे । सन् २००३ मा बोलिभारियन मिसन मार्फत ल्याएका सामाजिक न्याय र कल्याण, गरिबी निवारण, समाजवादी व्यवहारिक शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र सैनिक सुधार लगायतका कररिब ३० महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरेरै छाडे ।
उनी भेनेजुएलामा मात्र होइन, विश्वमै समाजवादी आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन लागि परे । उनले पुँजीवादको मुख्य हतियार विश्व व्यापार संगठन विरुद्ध क्युवा, बोलिभिया, ब्राजिल, भेनेजुएला, निकारागुवा, होण्डुरस सहभागी छुट्टै व्यापार सञ्जाल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याए । उनले पेट्रो क्यारिब र मर्कोसुर व्यापार सञ्जालमार्फत क्षेत्रीय व्यापार अघि बढाए । साम्राज्यवादसँग पौँठेजोरी खेल्दै उनले साम्राज्यवादका सबै खाले हस्तक्षेपविरुद्ध लडे ।
उनले क्युवासँग मिलेर समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा थुप्रै अफ्रिकी आन्दोलनका साथै साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा समेत निर्माण गरे जसबाट हैटी, इरान, सिरिया र रूससँग समेत राम्रो सम्बन्ध कायम गरे । अमेरिकी महादेशीय जनताका लागि बोलिभारियन सञ्जाल, जनताको व्यापार सम्झौता, अल्बा, एक अन्तरसरकारी क्षेत्रीय संगठनको स्थापना गरी क्षेत्रीय सहयोग बढाए । अल्बालाई समाजवाद पक्षत्रर सरकारहरुको दक्षिण अमेरिकी सञ्जाल पनि भनेर चिनिन्छ ।
उनी दक्षीण अमेरिकी समाजवादी तरङ्गको आधार मानिन्छन् । उनी सत्तामा आएपछि नै अन्य दक्षिण अमेरिकी देशहरु ब्राजिल, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, इक्वेडर आदि देशका वामपन्थीहरुको सरकार बन्यो । यसैको जगमा अल्बाका समेत कुनै समय १३ राष्ट्र सहभागी बने । साम्राज्यवादसँग डटेर सामना गरेका उनी विश्व बैंकलाई साम्राज्यवादको दलाल संगठन मान्दथे । उनले विश्व बैंकको विरोध गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकबाट भेनेजुएलालाई मुक्ति दिलाए । विश्व बैंकको अरबौँ ऋण तिरेर देशलाई ऋणमुक्त बनाए । साथै लण्डनमा रहेको भेनेजुएलाको १६० टन सून फिर्ता ल्याएर विश्व पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई घुँडा टेकाए । उनले वैकल्पिक सञ्चार माध्यमको रुपमा टेलिसुरलाई स्थापना गरी स्थापित गरे जुन आज पनि जनमुखी सञ्चार माध्यमको रुपमा चिनिन्छ ।
क्रान्ति, ‘कू’ तथा हत्या प्रयासको श्रृंखला
सन् १९९८ मा ह्याुगो चाभेजले चुनाव जितेपछि उनले सन् १९९९ मा संविधान सभाको निर्वाचन गरे । संविधान सभाले नयाँ संविधान बनायो । नयाँ संविधानमार्फत भेनेजुएलालाई बोलिभारियन गणतन्त्र भेनेजुएलाको रुपमा परिवर्तन गरियो । भेनेजुएलाको क्रान्ति विश्वको पछिल्लो र नमूना क्रान्ति हो । चाभेजले त्यहाँको तेलबाट विश्वकै धनाढ्य मालिक बनेकाहरुको तेलखानी राष्ट्रियकरण गरे । उनले संविधानमा न्यायपालिका र संसदको शक्तिमा संशोधन गरे । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, पुँजीवादी हस्तक्षेप र नवउदारवादको विपक्षीमा तथा वैकल्पिक विकास नीतिको वकालतमा समाजवादी आय वितरण, समान हैसियतको वैदेशिक नीति र लोक कल्याणको पक्षमा व्यापक सुधार मार्फत बोलिभारियन क्रान्ति सम्पन्न गरे । साम्राज्यवाद र पुँजीवादीहरुको सातो जानेगरी चाभेजले गरेको आमूल परिवर्तनले उनीहरुलाई त्रसित गरायो । उनीहरु षडयन्त्रका तानाबाना बुन्न थाले । साम्राज्यवादीहरुको सहयोगमा सन् २००२ मा उनी र बोलिभारियन क्रान्तिविरुद्ध पहिलो निरंकुश ‘कू’ भयो । तर व्यापक जनसमर्थनका कारण लामो समय टिक्न सकेन । लाखौँ जनता सडकमा आई उनलाई फेरि पदमा बहाली गरे । सन् २००४ मा जनमत संग्रह गरी उनी फेरि पूर्नबहाली भए ।
भेनेजुएलाली क्रान्तिबारेका भ्रम र यथार्थ
भेनेजुएलाबारे बुझ्नुपर्ने पहिलो सत्य मूलधारका भनिएका सञ्चारमाध्यम टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट मार्फत भेनेजुएलाको अवस्थाको बारेमा आएको जस्तो न त त्यहाँ संकट छ, न मादुरो कमजोर छन् । धेरै जसो बुर्जुवा समाचारमा कुनै सत्यता छैन र यी सूचनाहरु सुनियोजित रुपमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा भ्रम फैलाउन तथा त्यहाँको सरकारको बदनाम गर्ने उद्देश्यले प्रेसित भएका छन् ।
भनेजुएला विकासको हिसाबले दक्षिण एसियाका देशभन्दा निकै अघि छ । त्यहाँ न खाद्य संकट छ, न त कुनै आवश्यकीय सामग्रीको । चरम नाकाबन्दी र साम्राज्यवादी घेराउको बाबजुद व्यापक जनसमर्थन र लोकप्रियतामा निकोलस मादुरोको नेतृत्वमा भेनेजुएला सम्पूर्ण षडयन्त्र र घेराउको सामना गर्दैछ । त्यसैले पनि साम्राज्यवादीहरुले चाभेजको मृत्युपछि आज या भोलि भेनेजुएलामा मादुरोको सरकार ढल्छ भनेको आज ७ वर्ष बित्दा पनि भेनेजुएला समाजवादको यात्रामा अग्रसर छ । मादुरोको नेतृत्वमा कैयन पटक विभिन्न निकायका निर्वाचन भए । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै मादुरो निर्वाचित भए । डलरको राजनीति र वित्तीय पुँजीवादका कारण मुद्रास्फितिको समस्या भएपनि भेनेजुएला क्रान्ति र जनमतको जगमा उभिएको देश भएका कारण भेनेजुएला विश्व साम्राज्यवाद विरुद्धको अभियानको केन्द्रमा छ ।
ह्युयो चाभेजको निधन मार्च ५ सन् २०१३ मा भयो । भेनेजुएलाको विकास र समृद्धिमा ह्युगो चाभेजको योगदान निकै ठूलो थियो । उनको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनुकरणीय छ । जनताको आवासका लागि उनले लाखौँ घर बनाई हस्तान्तरण गरे । ह्युगो चाभेजले सत्तामा आएपछि कैयौँ तेल कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरे । करहरु बढाए । र, त्यसरी आर्जन गरेको आम्दानीलाई गरिबी निवारण, शिक्षा र जनताको आवासमा खर्च गरे । सरकारी खर्चको भरपुर प्रयोग गरेर उनले देशको मुहार बदले । सामाजिक परिवर्तनसँगै चाभेजले तेल कम्पनीको राष्ट्रियकरण गरी यसैबाट प्राप्त आम्दानीबाट देशको विकास गरे । अझै पनि विश्वका समाजवादी सामु भेनेजुएलाको समाजवादी क्रान्ति आजको युगको क्रान्तिको रुपमा परिचित छ । चाभेज समाजवादी नेता थिए । उनी असंलग्न राष्ट्र आन्दोलनका सक्रिय सदस्य थिए, जहाँ १०० भन्दा बढी देशको सहभागिता थियो । उनको जन्म दिवसको अवसरमा उनप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन ।
(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
पछिल्लाे - के हुन प्रचण्ड ? को हुन प्रचण्ड ?
अघिल्लाे - क. प्रचण्ड : गणतन्त्र नेपालका पिता